Opdon-odpiin jaarmayaa maqaa oromoon dhaabbachuuf Haamilees hin qabdu.Yakkas Seenaa badaa waggoota 27 guutuu ishiitu nu irratti raawwachise. – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosOpdon-odpiin jaarmayaa maqaa oromoon dhaabbachuuf Haamilees hin qabdu.Yakkas Seenaa badaa waggoota 27 guutuu ishiitu nu irratti raawwachise.
Obboleessikee wajjin laaqana nyaattee, si biraa gaafa rasaasaan dhangala’u, maalif nan boossisu? Reeffasaa fudhattee hospitaalatti kafanachuuf gaafa deemtu “lafa kaa’i Dhagaarratti kufe jedhi” yoo jedhamtu, diddeemmoo ammas atis irratti rasaasaan qomarra rukutamte, hiriyaan sibiraammoo mar’ummaanshee gaafa jigu akkamitti imimmaan qabatta. Kana ijakoon arguu caalaa waan na boossise hin jiru. Kora bittinneessaa oromiyaa rabbi dhiiga hiriyoota kootii inuma isin harka barbaada.
Opdon/odpiin jaarmayaa maqaa oromoon dhaabbachuuf Haamilees hin qabdu.Yakkas.Seenaa badaa waggoota 27 guutuu ishiitu nu irratti raawwachise. Opdoof qeerroon Carraa kennee turre,itti fayyadamne.Waadaa Galte raawwachuu hin dandeenye. Deebitee of suphitee jirti.
Hiriira kaleessaa Amboo irratti Gaffii gafatamaa turan…
Aangoo fi bu’aaf jecha TPLF tti hidhata godhachuun keesumaa Securty Shaawit ,General Kinfee fi General Haadigoo waliin Net work mijeefatanii Amboo/Godina/oromiyaa warreen Bara dheeraaf Saamsisaa,Ajjechisaafi hiisisaa kan turaan maqaa dha’uun balaaleffataniiru.Ummanni Amboo sirritti isaan beeka.
Opdo moofaan Aangoo irra jiran seeratti dhiyaachuu qaban keessaa warreen muraasni
11,Semuel Tesfaye (BEko)
19, Maggistuu Raggasaa.
22,sobbooksaa Mulaatu.(Securty Tplf)Kan God/Sh/lixaa.
23,Tasfaayee sahiiluu fi kanneen hafanis titi fufa.
Otoo Paartiiwwan mormitootaa Oromoo saffisaan dafanii ummata ijaaruu danda’anii silaa #OPDO_ODP Oromiyaa keessaa buqqisanii gatuuf filannoo biyyaalessaa bara 2020 /lamaan dhufu eeguun yeroo gubuu malee homaa hinbuusu ture.
Nuti Qeerroon oromiyaa OPDO [ODP] aangessuuf miti kan qabsaa’aa turre !!
Opdon Namoota haaraa daandeetti qabaaniif Ummanni filatutti aangoo hiruu sodaattee Opdo moofaa durii wiiin kufaa jirti.
Qeerroo Amboo !
Barattoota Yuunbrsitii #MaddaWalaabuu WBOn wabii fi gaachana keenya.
Ginciin hiriira nagaa irraa jirti. Dhaadannoonis
1, Ajjeechaan uummata Oromoo irraa haa dhaabatu
2 Daangaan Oromiyaa haa kabajamu.
3 Manneen bulchiinsii magaalaa finfinnee naannoo Oromiyaa keessatti hojjeete Namoota lafa sana irraa baqqaa’aniif deebi’ee haa kennaamuuf fi kkf
#Buraayyuu poolisootaa Oromiyaa fi Qeerroo
Ajeechaan nurraa haadhaabbatu..
Ajeechaan nurraa haa
Hiriira Nagayaa Tibbanaa
Gullallee post’ marsaariitii irraa gara barruuleetti. Ebba barrulee Gullallee post.Abbumman Issa Kan Obbo Jawar Mohammed.